Sita Ram Goel - ဝီကီပီးဒီးယား
အိန္ဒိယ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ စာရေးဆရာနှင့် ထုတ်ဝေသူ
Sita Ram Goel (၁၉၂၁ အောက်တိုဘာ ၁၆ - ၂၀၀၃ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်) သည်အိန္ဒိယသမိုင်းပညာရှင်၊ ထုတ်ဝေသူနှင့်စာရေးသူဖြစ်သည်။ သူသည်အိန္ဒိယသမိုင်း၊ ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များကြောင့်လူသိများသည်။ သူသည်ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့်နေရူးအားဝေဖန်သူဖြစ်သည်။ သူကဘာသာရေးကိုဝေဖန်သူလည်းဖြစ်တယ်။ သူသည် Ram Swarup နှင့်အတူသူသည် Voice of India ပုံနှိပ်တိုက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
India's only communalist: In commemoration of Sita Ram Goel; Edited by Koenraad Elst; Voice of India, New Delhi. (2005) ISBN 81-85990-78-6 (With contributions by Subhash Kak, David Frawley, Lokesh Chandra, Shrikant Talageri, Vishal Agarwal, N.S. Rajaram and others.)  Archived 16 July 2011 at the Wayback Machine.
↑ Dr. Sebastian Kim. The debate on conversion initiated by the Sangh Parivar, 1998-1999. India's only communalist: In commemoration of Sita Ram Goel; Edited by Koenraad Elst; Voice of India, New Delhi. (2005) ISBN 81-85990-78-6 (With contributions by Subhash Kak, David Frawley, Lokesh Chandra, Shrikant Talageri, Vishal Agarwal, N.S. Rajaram and others.)
Sita Ram Goel books
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Sita_Ram_Goel&oldid=623194" မှ ရယူရန်
၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။